ကလိုစေးထူး: ကျနော့် အကြိုက် (၆) ...
Posted by ကလိုစေးထူး at 8:01 PM
ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေမှန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တွေးစရာတွေ
အများကြီးပါတဲ့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို တင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ…
ကျမကတော့ Collapse ဆိုတဲ့ စကားလုံးမျိုးကိုတောင် မဂျူးက အသားလွတ်ထည့်တာမဟုတ်ဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်..
မနက်စောစော ဖတ်ပြီးချိန်မှာ ရင်မောကျန်ခဲ့တယ်...
May 30, 2007, 9:45:00 PM
ဂျူးကိုအရမ်းသဘောကျမိပါတယ်။ ပြောချင်တာတွေကို မငြိအောင်၊လွတ်အောင် ပြောနိုင်ရေးနိုင်တဲ့အတွက်ပါ။ ဆရာမမေငြိမ်းပြောသလိုပါပဲ သူသုံးသွားတာလေးတွေက အကုန်အဓိပ္ပါယ်ရှိနေသလိုပါပဲ။ ဒါလေးကို ဖတ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့ ကိုကလိုစေးထူးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
May 31, 2007, 12:57:00 AM
အေးဗျာ။ ကျနော်လည်း စာဖတ်ပြီး ငိုင်သွားမိတယ်။ တိုင်းပြည်ကတော့ သွားပါပြီ။ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။
စာသင်ခန်းထဲမှာ ရှိရမယ့် ကလေးငယ်တွေ …
အိမ်ဦးခန်းမှာ ဘုရားခန်းမှာ ရှိရမယ့် သက်ကြီးရွယ်အို အဘိုးအဘွားတွေ …ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ရောက်နေတာဟာ …တော်တော်ဆိုးပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကျမတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်မှာ ဒီလိုမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး။ မကြုံစေချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ …. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ … ။
သူတို့တွေ အားလုံး လမ်းပေါ်ရောက်နေကြတယ်။ သူတို့နှုတ်ဖျားက အသံတွေကို အားလုံးကြားကြတယ်။
သူတို့ ရင်ထဲက အသံတွေကိုရော … ဘယ်လိုနားနဲ့ ကြားနိုင်ကြမလဲ … ။
ဒီစာအတွက် ဆရာမ ဂျူးကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်။
ပြန်လည်ဝေမျှပေးတဲ့ ကိုသံလွင်ကိုလည်း ကျေးဇူး … ။
Jun 1, 2007, 5:51:00 AM
ကိုစေးထူးရေ.. ဒါလေး ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲ နင့်သွားတယ် ။ အဲလိုကလေးတွေကို ကျမဗမာပြည်ပြန်တုန်းက အတုံးအရုံးတွေ့ ခဲ့ဖူးတယ် ။
Jun 1, 2007, 7:34:00 AM
hello it give me lots of knowledge..thz for sharing.
i had seen this kind of saturation so many time...it is not only in the book but also in the real life....moreover this sturation shouldn't be for us. we are buddhism..we are kindful people...
i really feel sad after reading this...anyway thank u.
Sep 26, 2008, 12:01:00 PM